ကြည့်ရှုရန် အကောင်းဆုံး Disney Plus စီးရီး - VidaBytes | LifeBytes
ယခင်ဆောင်းပါးတွင်၊ သင်မသိသေးပါက ကြည့်ရှုသင့်သည့် အကောင်းဆုံး Disney Plus ရုပ်ရှင်များအကြောင်း သင့်အား ပြောပြထားပါသည်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဒီ post မှာ ဆိုဒါနှင့် ပေါက်ပေါက်ဖြင့် သင့်ဆိုဖာပေါ်တွင် အပန်းဖြေအနားယူရန် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး Disney Plus စီးရီးအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါမည်။
Disney Plus သည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအား မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာရွေးချယ်စရာများစွာကို ပေးဆောင်သည့် streaming platform တစ်ခုဖြစ်သည်။. အမျိုးအစားစုံလင်လှသောကြောင့် အချို့အချိန်များတွင် ရုပ်ရှင် သို့မဟုတ် ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုအတွက် ဆုံးဖြတ်ရခက်နိုင်သည်။
စိတ်မပူပါနှင့်၊ ထို့ကြောင့် ကျယ်ပြန့်သော Disney Plus ကတ်တလောက်တွင် သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးစီးရီးများကို ရွေးချယ်ပေးကာ သင်ယခုပင် စတင်ခံစားနိုင်စေခြင်းဖြင့် သင့်အား ကူညီရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဤနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။
1 Disney Plus တွင် ယခုကြည့်ရှုရန် အကောင်းဆုံးစီးရီး
1.1 Boba Fett ၏စာအုပ်
1.2 အဆိုပါ Mandalorian
1.3 အဆောက်အဦးထဲမှာ လူသတ်မှုတွေချည်းပဲ။
1.6 Falcon နှင့် Winter Soldier
1.11 Hawk ရဟတ်ယာဉ်
1.17 Scarlet Witch နှင့် အမြင်
Disney Plus တွင် ယခုကြည့်ရှုရန် အကောင်းဆုံးစီးရီး
အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း၊ တစ်ချို့က The Mandalorian ကို ချစ်မြတ်နိုးသူများဖြစ်ကြပြီး အချို့က ကာတွန်းစီးရီးကို နှစ်သက်ကြပြီး အချို့က ပိုမိုထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဇာတ်လမ်းတွဲများ စသည်တို့ကို နှစ်သက်ကြသောကြောင့် ၎င်းတို့အားလုံးကို အဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
Disney Plus သည် အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုရကျိုးနပ်မည့် စီးရီးများ ထွက်ရှိထားပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားသော မူရင်းစီးရီးများဖြစ်သည်။. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့်ပလပ်ဖောင်းသည် ပရိသတ်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက်သာမက အထူးသဖြင့် မိသားစုများအတွက် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Star Wars ကမ္ဘာကို ချစ်မြတ်နိုးသူများ၊ ဤစီးရီးသည် သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် Sarlacc တွင်းထဲသို့ ကျဆုံးခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သော ဘောနပ်မုဆိုး Boba Fett ၏ဘဝသို့ မြှုပ်နှံထားသည်။
ဤစီးရီးသည် သင့်အချိန်နှင့်ထိုက်တန်သည်၊ Star Wars စကြာဝဠာအကြောင်း မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ခံစားရန် အခန်းနံပါတ်လေးအထိ စောင့်ရပါမည်။ အဲဒီအပိုင်းလေးခုကို ကျော်ဖြတ်ပြီး5ကိုရောက်တဲ့အခါ မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်က ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။
အခန်းများ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ဇာတ်ကွက်သည် ပို၍စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာမည့် စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။. ထုတ်ဝေသည့် ပထမလများတွင်၊ စီးရီးသည် ပလက်ဖောင်း၏ အထင်ကရအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
အင်ပါယာကျဆုံးပြီးနောက်နှင့် First Order များမထွန်းကားမီ Star Wars စကြဝဠာတွင်သတ်မှတ်ထားသည်။. နဂါးငွေ့တန်း၏အချုပ်အနှောင်တွင်အလုပ်လုပ်နေသော Mandalorian မျိုးနွယ်စုမှ စွန့်စားရှာဖွေသူ Mando ၏ဇာတ်ကောင်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံသည်။
ဒီနေရာမှာတော့ ကျွန်တော်ပြောနေတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ရာနှုန်းပြည့် ကြည့်ရကျိုးနပ်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မကြည့်ရသေးတဲ့ သူတွေကို စိတ်မပျက်စေပါဘူး။. သည်းထိတ်ရင်ဖို နှင့်ဟာသများ ရောနှောထားသော စစ်မှန်သော ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး မိနစ်ပိုင်းမှ စတင်၍ ဖမ်းစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထူးဆန်းသော ဇာတ်ကောင် သုံးဦးသည် တူညီသော အရာတစ်ခု ၊ ရာဇ၀တ်မှု ကို စွဲလမ်းခြင်း ၊. ၎င်းတို့သည် ဤပရိသတ်များဖြစ်ကြပြီး Upper West Side တိုက်ခန်းများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်မှန်သောရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုတွင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ကို တွေ့ရှိသောအခါတွင် ၎င်းတို့၏ဘဝသည် ပြင်းထန်သောပြောင်းလဲမှုကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သူ့နောက်မှာ ရာသီငါးခု၊ သင်သည် အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး ခေတ်မီသောအမြင်ဖြင့် အချစ်နှင့် ပျော်ရွှင်မှုကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာများကို ဇာတ်ကြောင်းပြောပြသည်။. အရမ်းမအောင်မြင်သေးတဲ့ ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြောက်ရွံ့မှု၊ ကြေကွဲမှု၊ လိင်မှု၊ ခင်မင်မှုစသည်ဖြင့် ရောထွေးနေတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနှင့် အဆိပ်သင့်သော ဇာတ်ကောင်နှစ်ခု။
Jimmy နဲ့ Gretchen တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ထူးခြားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။; အတန်ငယ် ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားတွေပြောလို့ သူ့ရည်းစားဟောင်းရဲ့ မင်္ဂလာပွဲက နှင်ထုတ်ခံခဲ့ရပြီး ဇနီးမောင်နှံကို ပေးခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်တွေထဲက တစ်ခုကို ခိုးယူပြီးနောက် ပါတီက ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
အပိုင်း ရှစ်ပိုင်းပါသည့် ဇာတ်ကားများ သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဘိန်းစွဲခြင်းကို တိုက်ဖျက်သည့် သမိုင်းကြောင်းဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။. ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် နိုင်ငံအတွင်း အဆိုးရွားဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ကပ်ရောဂါကို ဖြစ်ပွားစေခဲ့သောကြောင့် ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်။
ဤအကျပ်အတည်းကို အခွင့်ကောင်းယူနေသော တပ်များကို ဖြုတ်ချရန် သူရဲကောင်းများ ဆက်တိုက် တိုက်ပွဲဝင်မည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရေးနှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်များ Beth Macy မှ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြင့် ဖန်တီးထားသော စီးရီးများ။
Falcon နှင့် Winter Soldier
စုစုပေါင်းအခန်းခြောက်ခန်းပါသော ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုထားသော ကဏ္ဍများထဲမှ နောက်တစ်ခု။ Marvel လောကမှာ သူတို့ရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက် နေထိုင်ခဲ့တဲ့ စွန့်စားခန်းဇာတ်လမ်းတွေကို သူတို့က ပြောပြတယ်။; Falcon နှင့် Winter Soldier ။
ဤဇာတ်ကောင်၏အမွေဆက်ခံသော Captain America ၏သူငယ်ချင်းများဖြစ်သည့် Sentinel of Liberty ကို ရည်စူးပါသည်။ Sam Wilson နှင့် Buvky Barners တို့သည် Avengers: Endgame ၏အဆုံးတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး ယခုအခါ ၎င်းတို့သည် စွန့်စားခန်းတစ်ခုကို စတင်ရန် တာဝန်ယူနေကြပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အရည်အချင်းနှင့် စိတ်ရှည်မှုကို စမ်းသပ်မည်ဖြစ်သည်။
လူတိုင်းက ချဲ့ကားတာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒီစီးရီးရဲ့ အပိုင်း ၃၃ ပိုင်းပါတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ဒီစီးရီးရဲ့ အပိုင်းတွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။. ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုပ်မြင်သံကြားတွင်သာမက Disney Plus ၏ကျေးဇူးကြောင့် ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာ နည်းနည်း အန္တရာယ်များတဲ့ အကြံပြုချက်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ဧကန်စင်စစ် သင်တို့သည် ရာသီရှိသမျှအခန်းများကို မမြင်ရကြ။ ဇာတ်လမ်းတွဲသည် အမေရိကန် လူ့အဖွဲ့အစည်းအကြောင်း ပြောရန် ဟာသကို အသုံးပြုထားသည်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဝါရောင်မိသားစုနဲ့ Springfield မြို့သားတွေက နေ့တိုင်း မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ဖြတ်သန်းကြတယ်။
Marvel Cinematic Universe နှင့် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် ပရိသတ်များအတွက် ရည်ရွယ်သည့် ထုတ်လုပ်ရေး။ ၎င်းတွင် Loki ၏ဇာတ်ကောင်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည့်အခန်းခြောက်ခန်းပါသောရာသီတစ်ခုရှိသည်။
Cosmic Cube ကို ခိုးယူပြီးနောက်၊ Loki သည် ၎င်းတို့အား ရွေးချယ်မှုပေးသော ကွဲပြားခြင်းအာဏာပိုင်အမည်ရှိသော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအဖွဲ့အစည်းရှေ့သို့ ခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်တရားကို ချေမှုန်းရန် သို့မဟုတ် တစ်ဖက်တွင် ပိုမိုကြီးမားသော ခြိမ်းခြောက်မှုကို တွန်းလှန်ရန် ကူညီရန်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဇာတ်ကောင်အား ခရီးသွားရန်နှင့် လူ့သမိုင်းတွင် ပါဝင်ရန် ဦးတည်စေသည်။
ဟာသ New Girl သည် ခေတ်သစ်အမြင်ဖြင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၎င်းတို့၏နေရာကို မသိသော သူငယ်ချင်းငါးဦး၏ စွန့်စားခန်းများကို ပြောပြပါမည်။
အဆင်မပြေလို့ လမ်းခွဲပြီးနောက် Jessica Day သည် သူမအား ကမ္ဘာကြီး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်စေရန် ကူညီလိုသော တစ်ကိုယ်ရေ အမျိုးသား သုံးဦးနှင့်အတူ ပြောင်းရွှေ့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူတို့နေထိုင်ရာ၊ ဤသူငယ်ချင်းအုပ်စုသည် အလွန်ရယ်စရာကောင်းသော မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Cece မှ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ သူတို့တစ်ဉီးချင်းစီဟာ သူတို့ထင်ထားတာထက် ပိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
ဘုန်းကြီးအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အတန်ငယ်အန္တရာယ်များသော ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုတွင် စတင်ခဲ့သော မူလ Mercury အာကာသယာဉ်မှုး ခုနစ်ဦးပါရှိသည်။. စီးရီးနဲ့ နာမည်တူတဲ့ 1979 Tom Wolfe ဝတ္ထုကို အခြေခံထားပါတယ်။
ဆိုဗီယက်စစ်တပ်က နယ်မြေစိုးမိုးထားချိန် 1958 မှာ စစ်အေးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိူင်ငံတော်ပြိုကွဲမှာကို စိုးရိမ်၊ NASA သည် Mercury ပရောဂျက်ကို တီထွင်သည်။. ဤပရောဂျက်တွင် ပါဝင်သည့် အာကာသယာဉ်မှူးများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများသည် ၎င်းတို့အား သေခြင်းသို့ပို့ဆောင်မည့် သို့မဟုတ် မသေနိုင်သော စွန့်စားခန်းတစ်ခုတွင် ကျော်ကြားမှုတွင် ပါဝင်ကြသည်။
Marvel ၏အကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ်ခန်းကိုပြသသည့်အခန်းခြောက်ခန်းပါသောရာသီတစ်ခု. Kate Bishop သည် ရာဇ၀တ်မှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အလယ်တွင် သူ့ကိုယ်သူ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော လေးသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။
Avenger ဟောင်းတစ်ဦးအနေဖြင့် Clint Barton ၏ ဇာတ်လမ်းကို အာရုံစိုက်ထားပြီး ခရစ္စမတ်အတွက် ၎င်း၏မိသားစုနှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရမည်ဖြစ်သည်။ဒါပေမယ့် သူ့အတိတ်က တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ ခရစ္စမတ်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ထက် ပိုပြီး လုယက်နှိုးထလာတဲ့အခါ နှင်းဆီခင်းတစ်ခု ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသက် 22 နှစ်အရွယ် Kate သည် ဤစွန့်စားခန်းအသစ်တွင် သူ့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
စပိန်ဘာသာ ခေါင်းစဉ်ဖြင့်၊ Wonder Years သည် 1960 ခုနှစ်များအတွင်း Williams မိသားစုအကြောင်း စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။. 12 နှစ်အရွယ်ကလေးငယ် Dean ၏အမြင်မှဇာတ်ကြောင်းပြောပြသည်။
Montgomery ရှိ လူလတ်တန်းစား ရောင်စုံမိသားစုကို လွမ်းဆွတ်စွာ ရှုမြင်ပုံကို တင်ပြထားပါသည်။စဉ်ဆက်မပြတ်လူမှုရေးအပြောင်းအလဲများကြောင့် စိတ်ရှုပ်နေသောအချိန်နှင့် လူမျိုးရေးအခင်းအကျင်းသည် ၎င်း၏ဇာတ်ကွက်တွင် အလွန်ရှိနေပါသည်။
14 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး Penny Proud နှင့်သူမ၏မိသားစုများ၏စွန့်စားခန်းများကိုပြောပြသောအန်နီမေးရှင်းစီးရီး၊. မိခင် Trudy သည် အလုပ်သစ်တစ်ခု၊ ဖခင်ဖြစ်သူ၏ အိပ်မက်အသစ်များနှင့် Penny စိန်ခေါ်မှုအသစ်များ၊ သင်ကြားစရာများစွာရှိသည့် အိမ်နီးချင်းအသစ်တစ်ဦးရရှိထားသည်။
၎င်းတို့သည် သင့်အပိုင်းများကြားတွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။ Smithville မြို့မှာ ဇာတ်ကောင်အသစ် နှစ်ယောက်၊ Maya နှင့် KG ကလေးအသစ်နှစ်ယောက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရုံသာမက ဖခင်နှစ်ယောက်ရှိဖို့ ပထမဆုံးဖြစ်မယ့် ရပ်ကွက်ထဲမှာ။
Horror Series ကြိုက်သူများအတွက်၊ ဒါက သင့်အတွက်ပါ။. ၎င်းသည် ရာသီ ၁၀ ခုပါသော စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့တစ်ခုစီတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ကျော်သွားသည်ဟု ဆိုသူများရှိသည်။
Glee၊ Ryan Murphy နှင့် Brad Falchuk ကဲ့သို့သော အခြားသော ဇာတ်လမ်းတွဲများကို ဖန်တီးသူများမှ စိတ်ကူးပုံဖော်ထားသည်။ American Horror Story သည် မတူညီသောနေရာများနှင့် မတူညီသောဇာတ်ကောင်များဖြင့် ၎င်း၏ရာသီတစ်ခုစီတိုင်းတွင် မတူညီသောဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ပြောပြသည်။
ခုနစ်ရာသီ စုဆောင်းထားသော အခန်းကိုးဆယ့်နှစ်ခန်း၊ Sons of Anarchy သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့လေးတွင် တရားမ၀င်အလုပ်လုပ်နေသော ဆိုင်ကယ်သမားကလပ်ကို ဗဟိုပြုသည်။
အဖွဲ့အစည်းစတင်ကတည်းက ၎င်း၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကြီးထွားလာခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အဖွဲ့ဝင်များပါရှိသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည့်တိုင်အောင် ဌာနချုပ်သည် နယ်မြေများပိုမိုပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ ဇာတ်ဆောင် Jax သည် အဖွဲ့အစည်း၏ အစိတ်အပိုင်းဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လုပ်ရပ်များကို စတင်မေးခွန်းထုတ်လာသည်။ ကလပ်၏အခြားအဖွဲ့ဝင်များ။
streaming ပလပ်ဖောင်းတွင်ပါရှိသောကောင်းသောအကြိုမိတ်ဆက်ပွဲများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ Love, Simon ဇာတ်ကားကို အခြေခံပြီး Víctor Salazar ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို သိပါတယ်။. Victor သည် ၎င်း၏မိသားစုနှင့် မကြာသေးမီကမှ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီး ၎င်း၏ အထက်တန်းကျောင်းသစ်တွင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေသည့် ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ဒီကောင်လေး၊ မြို့သစ်၊ တက္ကသိုလ်သစ်၊ အတန်းဖော်အသစ် စသည်ဖြင့် အရာအားလုံးဟာ ဒီကောင်လေးရဲ့ဘ၀မှာ အတူတူပါပဲ။ နှင့် အချစ်ဇာတ်လမ်း ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် LGTB အများသူငှာ ဝင်လာသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် Victor သည် အစမှစတင်၍ ၎င်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်မည့် အချစ်ဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်။
Scarlet Witch နှင့် အမြင်
စုစုပေါင်း အပိုင်းကိုးပိုင်းဖြင့် ကြည့်ရှုရန် အကြံပြုထားသော နောက်ထပ် မီနီစီးရီးတစ်ခု။ ဤစီးရီးသည် ရိုးစင်းသောဘဝတွင်နေထိုင်သည့် စူပါပါဝါများရှိသည့် Wanda Maximoff နှင့် Vision တို့၏ဇာတ်လမ်းကို တင်ဆက်ထားသည်။ သူတို့သည် ထူးဆန်းသည့်အရာတစ်ခု ဖြစ်နေပြီဟု သံသယများ စတင်လာကာ အရာအားလုံးသည် ထင်သလိုမဟုတ်ပေ။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အပိုင်းခြောက်ပိုင်းရှိသည့် Niccolò Ammaniti မှ ဖန်တီးထားသော အီတလီစီးရီး. စီးရီးနှင့် နာမည်တူ ဝတ္ထုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားခြင်း။
Anna Salemi ၊ အသက် 13 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် Sicily တွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းသေဆုံးစေသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ၏အလယ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။. ၎င်းသည် ဘယ်လ်ဂျီယံတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် သေစေသော ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကျန်ကမ္ဘာ့သို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့အချက်က သားဖောက်တဲ့ကလေးတွေက အသက်အရွယ်တစ်ခုအထိ မထိခိုက်ပါဘူး။
ဤထုတ်ဝေမှုတွင် အပြီးသတ်ထိစပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းကို မရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးထက်ပို၍ ကလေးဘဝအမှတ်အသားပြုထားသော စီးရီးများထဲမှတစ်ခု. ဒီသူငယ်ချင်းအုပ်စု ဒါမှမဟုတ် ကလေးလေးတွေရှိတဲ့သူတွေရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို ပြန်လည်အသက်ဝင်လာအောင် ၀တ်ဆင်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
TJ နှင့် သူ့သူငယ်ချင်းများသည် အားလပ်ချိန်၌ သူတို့အားတင်ပြခဲ့သော စိန်ခေါ်မှုများကို ရှင်သန်ရင်း ငယ်စဉ်ကပင် ကျွန်ုပ်တို့အား အံ့သြသွားစေခဲ့သည်။၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ၊ လူတန်းစားစနစ်နှင့် မရေးမထားသော ဥပဒေများဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ကလေးများကို ကိုယ်စားပြုသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း။
အခုထိ လက်မလွတ်သင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး Disney Plus စီးရီးတွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေဟာ အခုအချိန်အထိ ရောက်လာပါပြီ။ သေချာတာကတော့ သင့်မှာ တချို့က ဒီစာရင်းမှာ မပေါ်သေးတဲ့ တခြားအကြိုက်ဆုံးစီးရီးတွေ ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် အမြဲပြောထားသလိုပဲ၊ အဲဒါကို comment box မှာထားခဲ့လို့ရပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » Entretenimiento » ကြည့်ရှုရန် အကောင်းဆုံး Disney Plus စီးရီး
Disney+ ရှိ အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များ